WAR-MURTIYEED: GORFEYNTA DOODII MUSHARAXIINTA DOORASHADA MADAXTOOYO EE SOMALILAND |
WAR-MURTIYEED: GORFEYNTA DOODII MUSHARAXIINTA DOORASHADA MADAXTOOYO EE SOMALILAND
GORFEYNTA DOODII MUSHARAXIINTA DOORASHADA MADAXTOOYO EE SOMALILAND
Ugu horeyn, hay’adda Daraasaadka, Siyaasada iyo Cilmibaadhista ee URG waxay bogaadin iyo ammaan u direysaa dhammaan hay’adihii agaasimey, hirgaliyay ee maalgaliyey Dooda Musharaxiinta Doorashada Madaxtooyo ee Somaliland. Waxay Hay’adda URG si gaar ah u bogaadinaysaa hal-abuurka iyo hirgalinta Doodda ee dhalinyarada Inspire Group, Telefishanka HCTV iyo Ururka Muuq Baahiyeyaasha.
Somaliland waa qaran taladiisa iyo dawladnimadiisa si madax-banaan u maamulayay muddo ku siman 26-sanno, kadib markii ay ka noqotey midnimadii ay la gashay Somalia 1960kii. Somaliland waxay soo gashay Lix (6) doorasho oo kala danbeeyay, kuwaasoo muwaadiniintu codbixin furan ku doorteen mas’uuliyiintooda dawladeed.
13ka November, 2017 waxaa loo asteeyey Maalinta Codbixinta Doorashada
Madaxtooyo ee Somaliland. Sidaas daraadeed, waxaa la galay wakhti olole oo axsaabta qaranku si weyn isugu hirdiyayaan hanashada codka iyo taageerada Codbixiyeyaasha diiwaanka gashan
Saddexda Musharax madaxweyne ee saddexda xisbi ee Faysal Cali Waraabe (UCID), Muuse Biixi Cabdi (KULMIYE) iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (WADDANI) waxay 19/10/2017 ku kulmeen dood nooceedu ahaa kii u horreeyey ee sidanoo kale loo agaasimo. Doodani waxay muujisay bisaylka siyaasadeed iyo hanaqaadka dimoqraadiyadeed ee Somaliland. Dhanka kalena, waxay dhiirigelisay dareenka rajada iyo yididiilada ku dhisan ee gaar ahaan haldoorka iyo guud ahaan dadweynaha Somaliland.
Gorfeynta dooddii Musharixiintii Axsaabta Qaranku waxay kor u qaadaysaa fahamka iyo wacyiga Bulshada ee ku aaddan falanqaynta kala tagsanaanta iyo gudbooneyeyaasha u dhexeeya siyaasadaha saddexda xisbi.
Gorfeyntani waxay fal-celin hannaansan ugu filnaan karta guud ahaan intii qabashada doodda ku lugta lahayd iyo gaar ahaana musharixiintii dooddu dhexmartey oo aan ka maarmayn inay helaan sawirka ay doodahoogu bixiyeen iyo guul iyo god-daloolooyin wixii ku ladhnaa hawraartii ay ka yidhaahdeen madashii doodda, sidoo kale waxay gorfayntani muhiim u tahay kor u qaadista habka iyo Tabaha doodaha noocan oo kale ah.
Hay’adda URG waxay Gorfeyntan u diyaarisay hab iyo hannaan ay ku sugi karto nuxurka iyo natiijada doodda ee ay War-Murtiyeedkan kusoo saartey.
Waxaa si taxadir leh u dhugtey Doodda Musharixiinta Saddex (3) Khabiir oo URG
ka tirsan, saddexda Khabiir waxay goob-joog ka ahaayeen isla markaana qiimayn guud ku sameeyeen madashii doodda, isla markaana ay dib u daawadeen muuqaalkii iyo codkii doodda laga duubay.
Ka dib dhugashadoodii iyo dhaga-wednaantoodii, waxay qaadaa dhigeen nuxurka dooddii musharixiinta iyo qiimayn guud ahaan barnaamijkii doodda. Natiijadii kasoo baxday xogtii iyo hannaankii barnaamijku tabiyey ayay Hay’adda URG marisay nidaamkeeda suggidda iyo hubinta xogaha hay’addu
Sida ku cad jaantuska hoose, lafagurka iyo gorfeyntan doodda musharaxiinta waxaynu iska taagi karnaa ama u googoosan karnaa 5 dhinac oo muhiim ah saldhigna u noqon kara iftiiminta nuxurkii doodda musharaxiinta iyo waliba dareenkii guud ee murashaxiinta iyo guud ahaan madashii doodda.
HANNAANKII IYO HABSAMI-U-SOCODKA BARNAAMIJKII DOODDA:
Sidaan kor ku xusnay inkastoo ay madashu ahayd tii u horaysay ee nooceeda ah haddana guud ahaan agaasinkii iyo abaabulkii Barnaamijka Doodda waxaa ka muuqday diyaar-garaw fiican, habsamaan iyo degenaan-jawi.
Waxaase muuqatay in madasha dooddu ka dhaceysay aaney ahayn xarun aqooneed sida jaamacad, machad iyo wixii la hal-maala oo ku haboonaan lahayd doodaha masiiriga ah ee noocan oo kale ah, iyadoo doodduna ay guud ahaan u dhacaysay hab wareysiyeed u badnaa waydiimo iyo falcelino. Balse ay ku yaraayeen haaneedinta iyo is-barbardhiga amaba in si qoto-dheer loo jeexjeexo afkaaraha tooska u khuseeya duruufaha waqtigan muhiimka u ah qarankeenna, si codbixiyayaashuna ay doodahaas ugu go’aan qaadan karaan.
1.1 Daadihintii iyo Tabintii Doodda:
Maamulka iyo xidhiidhinta dooddu waxay ahayd mid guud ahaan wanaagsanayd, haddana doodaha danbe ee mustaqbalka meelaha ay tahay in loo maareeyo qaab kasii wanaagsan waxaa ugu muhiimsan farriimaha la gudbinayo wakhtigii u dhexeeyey labadii qaybood ee doodda, iyo sidoo kale hordhicii ama ibo-furkii barnaamijkii doodda. Sidoo kale, waxa marar dhawr ah hakad aad u koobnaa ku yimid tabinta codadka ee Codbaahiyeyaashii Doodda lagu isticmaalayay. Waase arrin cudur daar leh oo ahayd mid farsamo oo aan la sii filayn sidii muuqatey, balse ay muhiim tahay in mustaqbalka laga taxadaro.
1.2 Tayada Su’aalaha iyo Qiimaynta Wakhtiga Jawaabta ee
Su’aalihii doodda lagu waydiiyay musharaxiintu waxay guud ahaan ahaayeen kuwo wanaagsanaa, qaybo badan oo nolosha dadka iyo dalka khuseeyana taabanayay. Bogaadin bay mudan yihiin diyaariyeyaashii Barnaamijka Doodda, maadaama wakhtiga ay ku diyaariyeen qabanqaabada Barnaamijka iyo samaynta su’aalahuba uu aad ugu yaraa una koobnaa.
Balse, gorfeyntani waxay boggaadintaas ka sokow, tilmaamaysaa hanaankii u wanaagsanaa ee loo samayn lahaa su’aalo mug iyo miisaanba badan isla markaana jirraba maanka iyo maskaxda musharixiinta, muwaadiniintana u kala muujiya awoodooda aqooneed, waayo-aragnimo, diyaarsanaan iyo qorsheyneed.
Hanaanka ugu wanaagsan ee aalaaba loo doorbido in lagu diyaariyo su’aalaha dooddaha noocan oo kale ah waa ka laga qayb-galiyo jaamacadaha, xarumaha cilmibaadhista, aqoonyahanka iyo bulshadda codbixiyeyaasha ah ee ay musharixiintu iska iibinayaan kana dalbayaan inay codkooda siiyaan. Gorfeyntani waxay talo ka bixinaysaa qaabka ugu wanaagsan iyo cidda ugu haboon ee ay tahay inay diyaariyaan kana baaraan-dagaan su’aalaha dooddaha noocan oo kale ah.
1.3 Maareyntii Wakhtiga ee Musharixiintu la Yimaadeen:
Dhinaca wakhtiga iyo maareyntiisa, muddadii dooddu socotey, guud ahaan wuu wanaagsanaa, waxa aannu ahaa mid in kastuu cidhiidhi ahaa wixii u badnaa ee lagu qaban karayay, lagu qabtey.
2. JAWIGII IYO XEELADIHII MUSHARIXIINTU LA SHIR YIMAADEEN:
2.1 Jawigii Musharixiinta:
Musharixiintu waxay u muuqdeen niman culays iska saaray u diyaar-garawga Barnaamijka. Sida ka muuqatay, waxay ku soo dedaaleen inay isku xeeraan hoggaanada, haldoorka iyo aqoonyahanka axsaabtooda. Waxay sidoo kale aad ugu dedaaleen inay dhawraan xayn-daabkii iyo qawaaniintii Doodda.
Wajigii hore ee doodda, musharixiintu waxay la yimaadeen maareyn wanaagsan oo ay wakhtigii aadka u koobnaa ee la siiyay ay isku dayeen inay ku sheegaan wixii ugu badnaa ee ay awoodayeen. Wajigii labaad se, waxaad moodaysay inay musharixiintu mudnaanta siinayeen inay wakhtigooda in ka mid ahna ku qaataan weerarka musharaxa kale ama difaaca dooddii ay hore u dhiibteen, taasoo keentey inay dooddu woxoogaa yar kululaatey, noqoteyna mid sii adkaata oo Musharax kastaa soo bandhigo awoodiisa wixii uu karo.
2.2 Jawaabihii Musharixiinta:
Gorfeyntani maaha mid ujeedkeeda u weyni yahay inay culayska saarto sidii Musharixiintu u kala wanaagsanaayeen, balse waxay culayska saareysaa inay bogaadiso guud ahaan Barnaamijka iyo gaar ahaan iftiiminta waxyaalaha doodaha dambe ee nooceeda ah loo sii horumarin karo loona sii qurxin karo, iyadoo muwaadiniinta fursad loo siinayo inay helaan xog ku filan oo ay ku kala xushaan tartamayaasha hawaystey inay kalsoonidooda kasbadaan, kuna hantaan hoggaanka dalka.
Sababta aanay gorfeyntani diirada u saarin inay faallayso sidii ay u kala tayo iyo tamarba badnaayeen jawaabihii musharixiintii dooday waxaa weeyi iyadoo aan wakhtigan xaadirka ah dadweynaha JSL taasi waxba kusoo kordhinayn, isla markaana jawigu u bislayn. Balse waa wax la sugayo in la faalleeyo tamarta hadalada musharixiinta doorashooyinka xiga doorashadan.
3. KAALINTII KASOO QAYB-GELAYAASHA IYO KELMADIHII MARTI-SHARAFTA
Kasoo qayb-gelayaashii madasha barnaamijku waxaa dhammaantood ka muuqday wajiyo diyaar-garaw iyo xiise badani ka muuqday, iyadoo kasoo qayb- gale kastaa kusoo dedaalay inuu madasha si wanaagsan goob-jooge uga ahaado, una fadhiyo halka la isla maro iyo sida doodda loogu kala calaf-qaado.
Dadku waxay isugu jireen xubno axsaabtii musharixiintoodu doodaysay ka tirsan, aqoonyahaniin, ururadda bulshadda iyo marti sharaf kale oo leh rag iyo haweenbba. Waxa se la tabayay oo markiiba ishu ku dhacaysay inaanay goobta joogin dadyawgii bulshadda dabaqadaheeda muruq-maalka ah meteli lahaa sida khudradleyda, caanoleyda, iyo guud ahaan danyarta aadka xaaladooda dhaqaale u liidato ee ka tirsan bulshadda reer Somaliland kuwaasoo dhammaantood mudan inay aragtidooda u bandhigaan Musharixiinta, isla markaana kelmado daarran baahidooda, dareenkooda iyo doonistooda ka yidhaahdaan goobta lana wadaagaan saddexda nin ee hoggaaminta dalkooda iyo qaabaynta mustaqbalkooda isku hirdiyaya kuna tartamaya.
In kastoo labadii kelmadood ee bulshada metelayay ee ay yidhaahdeen ka soo qaybgelayaashii ay taabanayeen baahida dadka codka bixinaya sida haweenka iyo guud ahaan codbixiyeyaasha reer Somaliland, haddana goobta fursad ay kaga hadlaan kamay helin ashkhaas danyarteena ka mid ah (tusaale ahaan muruqmaal, sida khudradley, kuuliga, iwm) kuwaasoo laga yaabi lahaa inay odhan lahaayeen kelmado jawiga goobta wax weyn ka baddala kuna xidha xaalada dhaqan-dhaqaale ee dhabta ah ee dadka intooda badani ku sugan yihiin.
Tallooyinkan waxa ay Hay’adda URG u hibaynaysaa cid kasta oo rabta inay Doodaha noocan oo kale ah sii joogteeyaan siina horumariyaan si dadweynaha fursad loogu siiyo inay helaan xogaha rasmiga ah iyo aragtiyaha dhabta ah ee Musharixiinta codka waydiisanaysa:
1) In Doodaha noocan oo kale ah madasha lagu qabanayo laga dhigo goob jaamacadeed ama xarun cilmibaadhiseed.
2) In astaamaha qarannimo ee dalkeenna sida calanka JSL, hal-ku-
dhegyada waddaniga ah, hal muceedyada dastuurkeena iyo wixii la hal maala lagu dedaalo in goobta dooddu ka dhacayso lagu xardho ama ay ka muuqdaan. Isla markaana heesta qaranimo ee calanka JSL lagu furo barnaamijka ugu horreynba.
3) In midabada nashqadaha gidaarada goobta loo miidaan-dayo oo ay noqdaan midabyo soo-jiidasho leh, isla markaana ay wajiyada musharixiintu si fiican uga muuqan karaan.
4) In su’aalaha doodaha noocan oo kale ah laga sii baaraan-dego la lana
kaashado khubaro waayo-aragnimo u leh hanaanka dhaqan-dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalkeenna, ama bulshadda qaybaheeda kala duwan ra’yi laga siiyo samaynta iyo xulashada su’aalaha si ay u noqdaan kuwo jirrabi kara musharixiinta, baahida dhabta ah ee dadweynahana ka tarjumaya, si fududna u muujin kara mugga iyo miisaanka aragtiyeed, siyaasadeed, diyaarsanaan iyo aqooneed ee musharixiinta doodaysa.
5) In saxafiyiinta daadihaynaysa barnaamijka si fiican kalsooni loo siiyo, lagana daayo in culays la saaro amaba la dhaariyo ama lagu kalifo in dareenkooda degenaan waayo wakhtiga ay barnaamijka ku gudo-jiraan.
6) Musharixiinta M/weyne xigeenka haddii la doodsiinayo in la siiyo
mawduuc ka gadisan kan musharixiinta M/weyne la siiyay, sida tusaale ahaan inay iyagu ka doodaan tayada, xaqiiq-ku-salaysnaanta iyo suurto- galnimada barnaamij-siyaasadeedyada axsaabtooda, taasoo si fiican u muujin karta wada-socodka, midnimada iyo aragtida xisbi kasta musharixiintooda m/weyne iyo m/weyne xigeen leeyihiin.
KU SAABSAN HAY’ADDA RG:
Hay’adda URG waa hal-abuur iyo himilo ay hureen qaar ka mid ah aqoonyahaniinta iyo mufakiriinta da’da yar ee Somaliland. Waa Hay’ad Aqooneed u igman Daraasaadka, Siyaasadda iyo La-talinta ku wajahan Horumarka, Nabadda iyo Xasiloonida Somaliland iyo guud ahaan Geeska Afrika. Hay’adani waxay la aasaasay 2016-dii May 5teedii. Hay’addu waxay xarunteeda dhexe ku leedahay Magaalada Hargeysa, waxaanay wakiilo ku leedahay qaar ka mid ah waddamada Geeska Afrika, sida Nairobi.
Xarunta Hay’adda URG macluumaadkeeda xidhiidh waa sida hoos ku xusan: